Xeryaha shaqada ee qasabka ah inta lagu gudajiray xasuuqii ka dhacay Morocco
Sheekadii Holocaust ee Morocco ee ku taal Wikipedia waligeed ma sheegin xeryaha qasabka ee cidlada halkaas oo ay Yuhuuddu ku dhinteen. Xusuusteennii waxaa burburiyey Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Morocco kadib sanad dhismo ah. Waxaan sidoo kale u soo qaadanay mowduuca qasabka ah taariikhda Morocco ee Wikipedia si loola dagaallamo been-abuurka taariikhiga ah iyo ka soo horjeedda Semitism. In kasta oo ay ahayd rakibaadda farshaxanka bilowgiiba si loo tilmaamo xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee Shiinaha u gaysanayo Uyghurs.
Gacaliye Sare Maxamed VI, Farshaxanka maahan dambi. Ururkayaga Jarmalka ee xuquuqul insaanka & kor u qaadista farshaxanka & dhaqanka waa inuu si deg deg ah uga cabanaayaa xadgudubyada xun ee xaga Xuquuqul Insaanka ee Morocco. Waxay dhammaantood ku bilaabeen jikada maraqa mobilada loogu talagalay Afrika, oo ay qabsatay kastamku tan iyo May 2018 ee Tangier, sababtoo ah waxaan ku qasbanahay inaan iibino maraqa ganacsi ee Marrakech. Muddo sanad ah, waxaan aragnay dad wax cunaya oo ka baxaya daasadaha qashinka, iyo jikadaheena maraqa sida muuqata waxay ka caawin laheyd dadka qaarkii inay dhergaan. Maxay saraakiishaagu u jebinayaan jaanteenna farshaxanimo? Arjiga dhismaha ee Sebtember 2018, kama aysan jawaabin masuuliyiintaada. Maalin kasta waxaan isku daynay inaan la xiriiirno maamulkaaga iyadoo loo maro dhammaan waddooyinka waddanka oo ka socda baarlamaanka oo aan sii marineyno safaaradaha Morocco ee aan shaqeyneyn. Weligood kama jawaabin. Bishii Disember 2018 shaqaalaheena kobcinta PixelHELPER Tombia Braide wuxuu u dhintay sababtoo ah wuxuu aad uga carooday hab dhaqanka masuuliyiinta oo u dhintay wadne istaag. Dabcan, waxaa loo aasay xusuus-qoodh aan cidina joogin isla markaana eedda loosoo gudbiyey Ballan-qaadaha Morocco. Waxaan u dhisiay sundial ahaan isaga oo lagu xusuusto isaga, tan waxaa burburiyey bulldozerkooda.Waxaan ku maalgelinay 100.000 € sannad gudihiis Morocco. Waxay ku shaqeysay rootida rootida qasacadeysan si ay u bixiso xasilloonida cuntada ee afrika waxaana ay maalin walba siin jirtay tuuladeena kibis bilaash ah. Gendarmerie-keena ayaa naga kaxeeya annaga oo ku soo booqda aagagga u sabab ah inay mamnuuc tahay inay na soo booqato. Su'aalaha ku saabsan eedeymaha martidayadu waxay noqon lahaayeen mid khaa'in ah oo Freemason aan loo dulqaadan karin. Intaa ka dib waxaa jiray dharbaaxo loogu talagalay booqdeheena. Suxufiyiinta waxaa si isdaba joog ah loogu diidey inay booliisku booqdaan hantideena. In kasta oo aan haysanno dhammaan dukumiintiyadii lagama maarmaanka u ahaa si aan u helno fiisooyinka maalgashadayaasha ee waddankaaga, oo ay ku jiraan 3 sano oo heshiis ah oo ay ikhtiyaar u leeyihiin inay iibsadaan, booliisku waxay doonayaan inay si adag noo cadaadiyo Waxaan codsaneynaa dib-u-celinta burburka iyo dib-u-dhiska xarunta rootida rootida ee qasacadeysan. Waa inaad sidoo kale u sheegtaa booliska degmadaada in farshaxan yahanadu aysan argagixis ahayn. Sababtoo ah taasi waa sida loola dhaqmayo. Shaqaalaheena waxaa ku hanjabaya Mkadem, gacanta bidix ee Caid, jir ahaan awood umaheyn inay xirto godadka darbiyadaheena dibedda. Dabaaldegga sonkorta kooxdeena waxay u baahan lahayd siliing rabies sababtoo ah qaniinyada eeyga. Nasiib darrose, waaxdeeda caafimaad ayaa lagu xiray Ait Ourir iyo Marrakech. Waxaan ka dalbanaynaa 100.000 Euro dib-u-dhiska iyo raali galin shaqsi ahaantaada taliyaha booliska ee Ait Ourir iyo Caid ee Ait Faska. Waligood nagama hadlaan laakiin waxay la xiriiraan oo kaliya dadka ag jooga. Sababo la xiriira rabshadaha booliis ee ka dhanka ah martidayada, waxaan u baahan nahay shaqaalaha 100 ee dookheena sanadka 100 ee Ait Faska & Ait Ourir inay ka shaqeeyaan mashruucyadeena farshaxanka.
Isku soo wada duuboo waxaa jiray ilaalintii Faransiiska ee Morocco 14 oo leh noocyo kala duwan oo leh nin 4.000 ah. Saddex meelood meelba waxay ahaayeen Yuhuud u dhalatay jinsiyado kala duwan. Maxaabiistu dhammaantood waxay ahaayeen rag, marka laga reebo Siidi Al Ayachi, oo ay ku jireen haween iyo carruur. Qaar ka mid ah xeryaha waxaa la ilaaliyay xarumaha xiritaanka, taas oo ah xabsiyo dhab ah oo loogu talagalay dadka ka soo horjeeda siyaasada Vichy. Kuwa kale waxa loogu yeedhay xerooyinka ku-meel-gaarka ee qaxootiga. Kuwa kalena weli waxaa loo haystay shaqaale ajnabi ah. Ama Yuhuudda ku jirta Xerada Bou Arfa ee hoos timaad Vichy, Trans-Sahab Railway waxay noqotay astaan ​​muhiim ah oo iskaashi lala yeelanayo shirkadda saddexaad ee Reich. Sidaa darteed, waxaa jiray baahi weyn oo loo qabay karti-shaqaale. Ayaa aan ka sii shaqeyn kari waayey dhimashada intaa ka badan.
Xerada Berguent (Ain Beni Mathar) waxaa maamula waaxda wax soo saarka warshadaha. Waxay si gaar ah loogu habeeyay Yuhuudda (155 bishii Luulyo 1942 ka dibna 400 oo ka bilawday 1943 sida ku xusan warbixinta CRI). "Laakiin raaxadaani ruuxiga ah kama yarayn xaqiiqda ah in xerada Bergue ay ahayd tii ugu xumeyd," ayuu yiri Jamaa Baida. Laanqayrta Cas ayaa la weydiistey in la xiro, Yuhuuddii ku noolayd Berguedu, gaar ahaan kuwa ka yimid Bartamaha Yurub, ayaa horay u cararay Faransiiska. Tabarucayaasha Legion shisheeye ee laga quus gooyay ka dib guuldaradii 1940 ka dibna loo geliyay "sababaha maamulka". Arintaani waxay ku dhacday Saul Albert, muwaadin Turki ah oo ku soo galay Faransiiska 1922. Waxaa lagu haystay Bergua ilaa laga sii daayay bishii Marso 1943. Xusuus-qorkiisa wuxuu qoraa:
"10. Febraayo (1941): Dhagax dhagxan maalintii oo dhan. 2. Maarso ...: Ku wareejinta kooxda shanaad ee Yuhuudda Jarmalka. Ma jecli taas haba yaraatee. Shaqadu isku mid ma aha; Waxay ahayd inaan daadino ... 6. Abriil: Noloshan dambe ma sii adkaysan karno. Waxaan qabaa qandho, ilig xanuun ... 22. Sebtember: Rosh Hashanah: Cidina ma dooneyn inay shaqeyso ... 1. Oktoobar: lama cunin ... "
Magaalada Boudnib, oo ah magaalo yar oo ay ku noolyihiin 10.000, xeryaha milatariga ee hadda jira ayaa ah markhaatiyadii ugu dambeeyay ee xerada ciidamada Faransiiska. Dadka da'da ah ee deggan waayacti jajabyada xusuusinta: "Waxaan kuu sheegayaa laba waxyaalood oo hubaal ah. Midda koowaad waa buugga Boudnib, oo inta badan ka kooban Yuhuudda. Ta labaad waa in magaalada inteeda badan ay magaaladu wax ku baratay dugsiga hoose. "(Tel Quel Magazine No. 274 ee 19./25, May 2007).
Maurice Rue, wariye shuuciyaal ah, ayaa halkaas lagu xannibay. Wuxuu noo sheegay in "oo ka mid ah maxaabiista 40, saddex-meelood ay ahaayeen shuuciyaal, hanti-yaqaanno, iyo Gaullists ka hor intaanay Yuhuudda 40 imaanin dhowr bilood."
Calaamad looga soo horjeedo dadka laga tirada badan yahay ee adduunka oo dhan. Dhismaha xuska xasuuqii ugu horeeyey ee Holocaust ee woqooyiga Afrika waxaa loogu tala galay in loogu adeego isha laga helo macluumaadka ku saabsan Holocaust-ka iskuulada iyo guud ahaan dadweynaha.
Haddii baloog walba dhaho wax ka badan kun eray. Shaqada dhismaha ee xasuuqii ugu horeeyey ee Holocaust ee Waqooyiga Afrika waxay ka bilaabatay 17.07. Waxaan samaynay talaabooyin si aan u siino booqdeyaasha shaybaarka hoose ee xannibaadda dareenka liidashada iyo cabsida ay dadku xilligaas ku hayeen xeryaha uruurinta. Waxaan dooneynaa inaan ka abuurno meel Waqooyiga Afrika taas oo keenta xusuusta da'da dijitaalka ah. Wadada tooska ah, daawadayaasha waxay joogaan goobta dhismaha waxayna u isticmaali karaan tabarucaadaada inay saameyn ku yeeshaan tirada shaqaalaha iyo guryaha la dhisayo. Markii dad badani daawadaan oo ku deeqaan waxa weyn ee xusuusinta Holocaust wuxuu noqdaa.
Tagged: Android App, maalgalinta dadka, gargaarka baniaadanimo, Livestream